Samsung waxay tiri Bixby Voice lama heli doono ilaa dhamaadka guga | War gadget
Tani waa sida ay u xoogan tahay ku dhawaaqida shirkadda South Korea ee ku saabsan mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee cusub ee Samsung Galaxy S8 iyo S8 +, kaaliyaha Bixby lama heli doono laga bilaabo bilowga aaladooda waana tan weel biyo qabow loogu talagalay dadka isticmaala ee u arka mid ka mid ah "riwaayadaha waaweyn" ee qalabkan ayaa laga tagay bilowgii. Dareenkan, waxa aan hayno waa ogeysiin rasmi ah oo ka socota shirkadda oo dib u dhigeysa daah-furka kaaliyahaan illaa dhamaadka guga.
Shaki la'aan tani waa dharbaaxo adag oo loogu talagalay astaanta lafteeda tan iyo markii ay uga tagtay xoogaa caddayn ah iyada oo la tixgelinayo xoojinta ay ku sameeyeen ikhtiyaarkan cusub ee qalabkooda iyo kuwa kale. Dhinaca kale, adeegsadayaasha qaar ayaa durba bilaabay inay ka cawdaan arrintan tan iyo waxay ku xayeysiiyeen sida la heli karo waqtiga bilaabista aakhirkana waxay umuuqataa inay xoogaa dib u dhici doonto.
Samsung lafteeda ayaa ku sheegay bayaan rasmi ah:
Iyada oo leh interface-keeda casriga ah iyo wacyiga macnaha guud, Bixby ayaa ka dhigi doonta taleefankaaga mid waxtar leh adiga oo kaa caawinaya inaad dhammaystirto hawlo kala duwan, oo kuu sheegaya waxa aad daawaneysid, barashada jadwalkaaga iyo xusuusinta waxa la sameeyo. Qaar ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan ee Bixby, sida Aragtida, Guriga ama Xusuusin, ayaa lagu heli doonaa iyadoo la bilaabayo adduunka oo dhan Samsung Galaxy S8 21-ka Abriil. Si kastaba ha noqotee, Bixby Voice ayaa loo heli doonaa Galaxy S8 ee Mareykanka dabayaaqada guga.
Uma muuqato wax cad in aaladaha Samsung ay suuqa la galaan kaaliye nus ah waana sababta ay u go'aansadeen inay dib u dhigaan bilaabitaankooda illaa inta ay si dhab ah u shaqeynayaan, iyagoo wax yar oo caddayn ah uga tagaya waxa lagu xusay nuxurkiisa iyo sida muuqata dadka isticmaala ee shaqo la'aanta daran , maadaama aysan awoodi doonin inay adeegsadaan kaaliyaha ay ahayd inuu la tartamo kaaliyeyaasha kale ee dalwaddii xilligii ugu horreeyay. Waxaa jira hadal ku saabsan guga dabayaaqadiisa laakiin sida iska cad ma jiro taariikh sugan, sidaa darteed waxay noqon doontaa wakhti dulqaad leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Samsung waxay leedahay Bixby Voice lama heli doono ilaa dhamaadka guga
Wararkii ugu horreeyay ee ku faafay shabakadda Xiaomi Mi Note 3